AH: Mystery Spot သို့မဟုတ် မြေထုဆွဲအားတွေ မူမမှန်တဲ့ နေရာလေး
အလိုလိုနေရင်း လူက စောင်းနေတော့ နေရတာ တစ်မျိုးကြီးပေါ့နော်.....
ကမ္ဘာ့မြေထု ဆွဲငင်အား တိမ်းစောင်းနေတဲ့ ပုံလေးပါ....
မြေထုဆွဲအားက တစ်ဘက်ကို စောင်းနေလို့ ဒီလို အထစ်ကလေးမှာတောင် မတ်တပ်ရပ်နိုင်ပါတယ်...
ဆွဲအားမူမမှန်လို့ Free Fall အခြေအနေမှာ တစ်ဘက်ကို စောင်းနေတဲ့ ပုံပါ
Source : (http://www.mysteryspot.com/)
Posted by AH at 1/24/2012 04:58:00 PM
blackroze January 24, 2012 at 7:13 PM
YL January 24, 2012 at 7:19 PM
စံပယ်ချို January 24, 2012 at 9:24 PM
ဘိုဖြူ January 24, 2012 at 9:50 PM
မိုးသက် January 25, 2012 at 12:29 AM
ဟုတ်တယ်အစ်ကို. ဟိုးငယ်ငယ်လေးတုန်းက ဆရာဝန်တင်ရွှေရေးတဲ့.စိတ်နယ်လွန်ဖြစ်ရပ်ဆန်းများ စာအုပ်ထဲမှာလားမသိဘူး
တစ်ခါဖတ်ဖူးတယ်.။ အဲဒီလိုနေရာရှိသေးတယ်ပြောတယ်.. ကနေဒါက သံလိုက်တောင်ကုန်း တဲ့.. အဲဒါတော့ မသိဘူး အစ်ကို သိရင်
တင်ပေးပါဦး...။အဲဒီလို ဟာလေးတွေကို စိတ်ဝင်စားတယ်..။
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! January 25, 2012 at 1:09 AM
မဒမ်ကိုး January 25, 2012 at 2:28 AM
သွားတော့ပါဘူး ပိုက်ပိုက်လဲရှိဘူးအေး)
အဆန်းပဲနော်.. အဲ့နေရာမှာ ရေတွေဘာတွေ သောက်ရင် ကောင်းကောင်းမှ ဗိုက်ထဲဝင်ပါ့မလားမသိ ??
လှည့်ပတ်နေတဲ့ အလွန်ကြီးမားတဲ့ အရာကြီးက ဘာကြီးများလဲ သိချင်လိုက်တာ